सडक, विजुली, रोजगारी र पारीको डकैती मुख्य समस्या - Arunkhabar.com
सडक, विजुली, रोजगारी र पारीको डकैती मुख्य समस्या
प्रकाशित : २८ कार्तिक २०७४, मंगलवार २१:५२
विराटनगर, २८ कात्तिक । Tadacip no rx, order dapoxetine. अन्यत्रको जस्तै मोरङ क्षेत्र नं २ का स्थानीय बासीको पनि नेताहरु प्रति एउटै साझा गुनासो छ – ‘चुनावका बेला दुई हात जोडेर नमस्कार गर्दै यो गर्छौ र त्यो गर्छौ भन्दै घर दैलोमा आउने नेता जितेर गएपछि फर्किएर आउँदैनन् ।’
मोरङ्ग क्षेत्र नं २ स्थित रतुवामाई नगरपालिका–४ आमबाडीकी शान्ति कालिकोटे भन्नुहुन्छ– ‘ नेताहरुले यो गर्छौ र त्यो गर्छौ भनेको बर्षौ भईसक्यो तर हाम्रो समस्या जस्ताको तस्तै छन्,’ “नेताहरु भोटका बेलामात्र आउँछन् जितेर गएपछि फर्किएर आउँदैनन् ।”
नेताहरुले गर्नुपर्ने कार्यसूची अघि सार्दै कालीकोटे भन्नुहुन्छ–‘हामी किसान हौ, गाडी कुद्ने बाटो, बिजुली र सिचाई भयो भने हामीलाई पुग्छ । विजुलीको राम्रो व्यवस्था भएमा त्यसैबाट सिचाईको काम गर्न सकिन्थ्यो ।’“पहिले गिरिजाको पालामा त केही भएको थियो तर अहिलेकाले त केही पनि गरेरन् ।”
दक्षिण तर्फ भारतीय सीमासँग जोडिन पुगेको उक्त क्षेत्रमा भारतीय क्षेत्रबाट हुने चोरी डकैती पनि प्रमुख समस्या रहँदै आएको छ । सोही नगर पालिका–५ स्थित घरु चौकका मो इस्फ आलम भन्छन्– ‘सीमा पारिबाट आउने चोर डाकाहरुले दिने दुःख पनि यहाँको ठूलो समस्या हो, तर अहिले यसमा केही कमी आएको छ । ’ स्थानीय घरु चौकमा प्रहरी चौकीको व्यवस्था भएपछि झण्डै ४ किलो मिटर दुरीमा रहेको सीमा पारी भारतीय भूमिबाट हुने चोरी डकैतीका घटनाहरुमा केही कमी आएको छ । आलम भन्छन्– ‘अहिले त धेरै शान्त भएको छ, पहिले त गाउँका गोरु देखि कुखुरा, बाख्रा केही रहँदैन थियो । ’
पूर्व–पश्चिम हुलाकी राजमार्गबाट दक्षिण पर्ने उक्त गाउँमा कालोपत्रे सडक र विजुली पुगिसकेको छ । त्यसैले स्थानीय बासीहरुलाई अहिले सडक र विजुली भन्दा पनि रोजगारीको चाहिएको छ । स्थानीय घरु चौकमा क्लिनक सञ्चालन गर्दै आएका प्रमोद यादब भन्छन्– ‘कृषिमा आश्रित यस ठाँउको मुख्य समस्या रोजगारी हो ।’ मुस्लिम समुदायको बाहुल्यता रहेको उक्त क्षेत्रका अधिकाँस यूवाहरु सानै उमेरमा रोजगारीका लागि भारतको गुजरात, हैदराबाद,दिल्ली लगायतका ठाउँमा जाने गरेकाछन ।
नजिकै देखिएका केही पक्कि घरहरु देखाउँदै यादबले भने– यी सबै घरहरु भारतकै रोजगारीका पैसाले बनेका हुन् । ’ बिजुली र सडक मात्र होईन, गाउँमा निर्माण हुन लागेको १५ सैयाको अस्पतालले समेत उनीहरुलाई केही राहत दिएको छ । उक्त क्षत्रमा भएका केही विकास निर्माणका लागि उनीहरु पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोईराला र निबर्तमा सभासद ऋषीकेश पोखरेललाई सम्झिन्छन् ।
तर बीचमा दुई कार्यकाल सभासद बनेर मन्त्री समेत हुुनु भएका काँग्रेस नेता आमोप्रसाद उपाध्याले भने केही काम नगरेको गुनासो उनीहरुको छ ।
रतुवामाई– ५ कै मो सहीमउद्धिन आफ्नै घर अगाडिको हुलाकी राजमार्ग देखाउँदै भन्छन्– ‘यो बाउ बाजेकै पालाको सडक अहिले पनि उस्तै छ, खै त नेताले काम गरेको ? आफ्नै पालामा त्यो सडक पीच होला भन्ने उनलाई लागेको छैन ।
सडक पीच मात्र होईन सोही राजमार्ग अन्तर्गत रतुवामा खोलामा १० बर्ष अगाडि निर्माण सुरु भएको पुल समेत अहिलेसम्म पुरा हुन सकेको छैन । उक्त पुलको निर्माण कार्य पुरा नहुँदा झापाको गौरीगञ्ज बजारसम्म आवत जावत गर्न समेत स्थानीयबासीहरुलाई समस्या भईरहेको छ ।
पहिले मोरङ क्षेत्र नं १ मा रहेको त्यो भूगोलमा अहिले पथरी–शनिश्चरे, रंगेली र कानेपोखरी गाउँपालिकाका केही वाडहरु थपेर क्षेत्र नं २ बनाइएको छ । उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा विभिन्न नगरपालिका र गाउँपालिकाका गरी २९ वटा वाडहरु रहेकाछन् । उक्त क्षत्रेबाट यस पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोईराला, आमोदप्रसाद उपाध्याय, र एमालेका ऋषीकेश पोखरेलले प्रतिनिधित्व गरिसकेका छन् । अहिले सोही क्षेत्रबाट बामगठबन्धनबाट ऋषीकेश पोखरेल र नेपाली काँग्रेसबाट डा मिनेन्द्र रिजालल प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।
विराटनगर, २० जेठ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र वल्र्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालको सहकार्यमा बालबालिकाको संरक्षण...
विराटनगर, १९ असोज । प्रदेश १ मा पछिल्लो २४ घण्टामा १८६ जनामा कोरोना संक्रमण भएको...